Tweetbot na ny fomba hahafatesan'ny fahombiazana | Vaovao IPhone
Tweetbot 2.0 ho an'ny Mac dia efa zava-misy. Ny fanavaozana ny mpanjifa Twitter nampanantenaina ho an'ny mpampiasa OS X dia efa misy ankehitriny, ary na dia nampanantena aza i Tapbots, maimaim-poana ny fanavaozana, vitsy ny mpampiasa faly amin'ity kinova vaovao ity noho ny antony roa: tara sy ratsy izy. Tsy fantatsika raha noho ny hazakazaka, raha noho ny fetran'ny Twitter, na raha tsotra satria te hikasika ny oron'ny mpanjifany i Tapbots ary izany no antony anaovany ireo zavatra ireo. Ny zavatra ratsy indrindra dia izao dia manohy tsy misy soritry ny fampanantenany hafa isika: Tweetbot ho an'ny iPad. Ary na izany aza isaky ny Tapbots manao zavatra mampihorohoro izao tontolo izao.
Tweetbot ho an'ny Mac dia fanavaozana izay, araka ny lazainay, efa niandry nandritra ny herintaona mahery. Ny fanavaozam-baovao farany nananan'ity fampiharana 19,99 € ity talohan'ny omaly dia tamin'ny volana aprily mba hanitsiana bibikely roa, ary ny iray talohan'ity tamin'ny Jolay 2014, efa nanolotra ny OS X Yosemite vaovao, ary aza mieritreritra fa nitondra fanovana lehibe ity fanavaozana ity, satria voafetra ihany ny manampy fiasa izay efa hita tao amin'ny fampiharana Twitter nandritra ny 4 volana: mampakatra sary maromaro miaraka amin'izay.
Fa andao hadino ireo fanavaozana taloha sy Andao hiresaka momba ny inona no mitondra antsika ity kinova 2.0 an'ny Tweetbot ho an'ny Mac ity. Ny hatsarana nohavaozina izay miharihary, miaraka amin'ny fisehoana mifanentana kokoa amin'ny Yosemite (averiko indray, herintaona taty aoriana) ary bokotra iray eo amin'ny ankavia ambany izay mamela anao haneho tsanganana vaovao miaraka amin'ireo lisitrao, tenifototra ary kaonty hafa raha tianao. Ity farany dia efa nisy tamin'ny kinova teo aloha fa izao dia atao intuitively kokoa noho ny teo aloha. Ary kely na tsy misy zavatra hafa azontsika lazaina momba ny vaovao. Eny afaka miresaka momba ny lesoka isika.
Ary ahoana ny amin'ny atiny multimedia izay hita ao amin'ny Timeline-ko? Eny, manohy manokatra azy io eo am-baravarankely Safaribot, tsy misy na inona na inona fanatontosana tafiditra ao amin'ilay fampiharana. Tsy ho afaka hahita GIF akory ianao ao anaty ilay fampiharana. Ary andao isika tsy hiresaka momba ny bokotra Retweet izay manjavona ary manakana ny fidirana haingana amin'ireo bitsika izay nandefa retweet anao. Ary ireo bitsika nampifandray anao? Eny, tsy misy, ity fampiasa Twitter "vaovao" ity izay misy ao amin'ny Tweetbot ho an'ny iOS tsy tafiditra ao amin'ity kinova vaovao ity koa.
1 Ary ny kinova ho an'ny iPad?
2 Miavona sy ambony
Ary ny kinova ho an'ny iPad?
Izany no nanontany tena antsika izay nividy Tweetbot ho an'ny iPad taloha. Aiza ny fanavaozana izay mahatonga ny Tweetbot ho an'ny iPad hifanaraka amin'ny iOS 7? Eny, tompokolahy, satria ny Tweetbot ho an'ny iPad dia mbola tsy nifanaraka tamin'ny sarin'ny rafitra fiasa efa ho roa taona. Raha zara raha misy ny fanavaozana ny Tweetbot ho an'ny Mac dia efa mampitomany ny olona ny an'ny iPad. Aleo tadidio.
Herintaona lasa izay dia nitranga ny fanavaozana farany, izay nanjary maloka ny kisary fampiharana. Tsy mihomehy aho fa maloka fotsiny mba hisakanana azy tsy hihira be ao amin'ny iOS 7, ny ambiny sisa tsy miova. Herintaona hanovana ny sosona ny kisary fampiharana, tsy misy na inona na inona. Ny kinova teo aloha, ny 23 May 2014, dia noteren'ny Twitter hitazona ny fampiharana hatrany, tsy nampiditra endrika vaovao. Azontsika atao ny miverina amin'ny 23 aprily 2013 hahitanao fanavaozana izay tena mampahafantatra zava-baovao. Roa taona mahery izay raha tsy manampy endri-javatra vaovao amin'ny fampiharana azy dia antony marim-pototra kokoa ho antsika izay mividy ilay rindranasa ho sosotra kely amin'ny Tapbots.
Ny kinova iPad dia ho hita miaraka amin'ny Tweetbot 4.0 ho an'ny iOS, izay ho kinova iraisampirenena, mifanentana amin'ny iPhone sy iPad, ary hanampy fanampiana ho an'ny maody fizahantany amin'ny iPhone (Wow!). Amin'ity fotoana ity dia tsy haiko raha fanavaozana maimaim-poana izany (misalasala aho). Betsaka no hiteny fa afaka roa taona izay nividy ny iPad dia tsy afaka mitaraina momba ny fandoavam-bola indray, fa raha mandinika izay nitondra antsika nandritra ny roa taona isika mikasika ny fanavaozana dia misy antony tsy tokony hahafa-po antsika. Tapbots.
Miavona sy ambony
Raha miampy ireo rehetra ireo isika dia miampy ny fieboeboana amin'ny mpampiorina azy dia hiharatsy hatrany ny raharaha. Indraindray aho nanana fotoana nifanakalo bitsika nangataka azy handika ny fangatahana ho an'ny iOS ary manolotra fanampiana azy tsy misy fitiavan-tena. Ny valinteniny dia isan-karazany indrindra na dia tamina endrika vazivazy aza. Rehefa nanoratra fitarainana taminy tamin'ny fomba marina indrindra aho, lNy hany zavatra azoko dia ny fianjerana mbola mitohy.
Azo antoka fa mihoatra ny iray no mieritreritra rehefa mamaky izany rehetra izany fa ny zavatra mora indrindra dia ny fampiasana fampiharana hafa, satria raha misy zavatra tsy hita ao amin'ny App Store dia mpanjifa Twitter izany. Novidiko ny ankamaroany: Twitterrific, Tweetings, Oosfora, Echofon, Twitter, Hootsuitesns. dia nandalo ny iPhone avokoa aho indraindray, saingy indrisy fa tsy misy afaka mampifanaraka an'i Tweetbot. Ny sasany tonga akaiky dia akaiky, toa ny Twitterrific, ary manantena mafy aho fa indray andro any dia handresy azy satria hitodika any aminy avy hatrany, fa amin'izao fotoana izao dia maro amintsika no tsy manan-tsafidy afa-tsy ny hampiasa ny Tweetbot na eo aza ny "fampijaliana" an'ny mpamorona azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Tweetbot na ny fomba hahafatesan'ny fahombiazana
iPicar: afeno ny resaka iMessage rehefa manokatra ny iPhone
Mpisokatra: mampiasa extensions iOS 8 hanokafana rohy ao amin'ireo fampiharana anao